Abavelisi beCatheter yokuQinisa | I-China Intubation Catheter Factory kunye nabaXhasi
Ababoneleli abaPhezulu i-China PVC Nasal Airway / i-Nasopharyngeal Airway
Ikhowudi yemveliso: BOT 128000 Intshayelelo: I-Nasopharyngeal Airway yityhubhu eyilelwe ukubonelela ngendawo yomoya ukusuka empumlweni ukuya kwi-pharynx yangasemva. I-Nasopharyngeal Airway inokudala umendo welungelo elilodwa lomenzi kunye nokunceda ukunqanda ukuphazamiseka komoya ngenxa yezicubu zehypertrophic. I-Nasopharyngeal Airway yenza i-patent yomoya kuwo wonke umgama webhubhu. I-Nasopharyngeal Airway inokuphazanyiswa ukuba indlela yeempumlo imxinwa kwaye idilize ububanzi obungaphakathi kwiNasopharyngeal Airway kwaye ...
Ezilahlwayo engenazintsholongwane Tracheostomy Tube Nge Cuff
Iityhubhu zeTracheostomy zisetyenziselwa ukuququzelela ukulawulwa komoya opholileyo, ukubonelela ngendawo yomoya yelungelo elilodwa kwizigulana ezithanda ukuthintela umoya, kunye nokubonelela ngokufikelela kwiphecana lokuphefumla elisezantsi lokususa umoya. Zifumaneka ngobukhulu obahlukeneyo kunye nezitayile.
Ixabiso leTekhnoloji yoNyango yePvc Tracheal Tube
Ityhubhu ye-Endotracheal yityhubhu yeplastiki eguquguqukayo ebekwa emlonyeni kwi-trachea (umbhobho womoya) ukunceda umguli aphefumle. Umbhobho endotracheal emva koko uqhagamshelwe kumatshini wokuphefumla, ohambisa ioksijini kwimiphunga. Inkqubo yokufaka ityhubhu ibizwa ngokuba yi-endotracheal intubation.
Ityhubhu yokurhafisa enentambo yesikhokelo esetyenzisiweyo yokomeleza ityhubhu endotracheal
Ukuqiniswa kwetyhubhu ye-endotracheal isekwe kwi-endotracheal tube. Kuye kwaqiniswa intwasahlobo ifakwe kwityhubhu, kunye ne-catheter efakwe kwi-trachea ukulungiselela injongo ephambili yokuseka nokugcina indlela yomoya yelungelo elilodwa kunye nokuqinisekisa ukutshintshiselana okwaneleyo kweoksijini kunye nekhabhon diokside.
I-Nasal Prefed Euffed Endotracheal Tube
Iityhubhu ze-Endotracheal ze-Preformed ziyilelwe ukuhambisa isekethe ye-anesthesia kude ne-operative field-nokuba yi-cranial okanye kwi-caudal direction. Iityhubhu ze-Endotracheal ze-Preformed ziyafumaneka kulungelelwaniso olwahlukeneyo kubandakanya iinguqulelo zabantwana kunye nabantu abadala.
Ezilahlwayo Oral Guedel Oropharyngeal yomoya
Indlela yomoya yeOropharyngeal (ekwabizwa ngokuba yindlela yomoya yomlomo, i-OPA okanye indlela yomoya yaseGuedel) sisixhobo sonyango esibizwa ngokuba sisixhobo somoya esisetyenziselwa ukugcina okanye ukuvula indlela yomoya yesigulana. Ukwenza oku ngokuthintela ulwimi ekugubungeleni ii-epiglottis, ezinokuthintela umntu ekuphefumlweni.